Saafi Films - News: Amaanka Suuqa Xoolaha Oo Faraha Kabaxay iyo Haweyney Lagu dilay
Amaanka Suuqa Xoolaha Oo Faraha Kabaxay iyo Haweyney Lagu dilay
wararka naga soogaaraya Xaafada Suuqa Xoolaha ee Dagmada Hiliwaa ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dil kaas oo loogeestay sida ay sheegeen qaar kamid ah dadka degaanka haweyney halkaasi ku dhaqaneed.
dilkaan ayaa waxaa lasheegay in ay u geesteen haweyneedaani labo ruux oo lasheegay in ay ku hubeysnaa Baskoolada Islamaarkaana ay sixun ula dheceen rasaasta.
dilka markii ay geesteen Labdaan ruux ayaa waxaa lagu soowaramayaa in ay durbadiiba goob ay kabaxsadeen.
haweyneedaani ayaa waxaa lagu soowaramayaan in ay kamid ah aheed dadka degaanka ilaa iyo haatamba lama oga cid dilkaan u geesatay iyo waliba sababaha loogu geestay dilkaan.
dilka kadib sida looga bartayba waxaa durbadiiba halka uu ka dhacay dilka soogaaray Ciidamo badan oo katirsan Dowlada Soomaaliya kuwaas oo lasheegay in ay halkaasi kasa meeyeen baaritaano xoogan hasa yeeshee macada cidda ay kusoo qab qabteen.
Xaalada Xaafada Suuqa Xoolaha ayaa maalmihii dambe waxa ay u muuqatay mid faraha kasiibaxeysay oo ay inta badan ay halkaasi ka dhacayeen dilal iyo qaraxyo qorsheysan.
nasro on October 20 2012 ·
4,529,159 unique visits